NIVEA MEN celebrates the launch of the new range of NIVEA MEN DEEP products in Yangon – LYCA COMMUNICATIONS
Date: November 22, 2019Author: Rahul0Comments
Yangon – November 22, 2019 – NIVEA MEN launchesanew rage of NIVEA MEN DEEP products in Yangon today at Myanmar Plaza, allowing men to get confidence to do best in any situation.
“NIVEA MEN DEEP products were launched in 2018 and it became the best selling products in both deodorant and face categories within 1 year. That’s why, today, NIVEA MEN is celebrating its successful launch together with media and consumers” said by NIVEA Marketing Manager, Nikki Seelen.
What is NIVEA MEN DEEP?
NIVEA MEN DEEP is the complete regime of deodorant and facial products. The products containapowerful charcoal formula which gives 48 hrs protection for deo, reduce oiliness and matte skin look in face.
1) NIVEA MEN DEEP ROLL ON & SPRAY (DARK WOOD, ESPRESSO, AMAZONIA)
3 X Powerful Charcoal Protection with Long Lasting3Fragrances
Benefit: NIVEA MEN DEEP with3times powerful charcoal protection against sweat & bacteria. Available in3long lasting fragrances (Dark wood , Espresso , Amazonia) for whole day long kick-off feeling with 48 hours protection.
Roll on: 25 ml (2,350 Kyats), 50 ml (4,200 Kyats)
Spray: 150 ml (6,200 kyats)
2) NIVEA MEN FACIAL SERIES
It has4variants and it is produced especially for oily skin.
Complete regime for face
Step 1 – Facial Foam
Step3– Facial Moisturizer
For oily to very oily skin
Step2– 1 minute mask
3) NIVEA MEN DEEP WHITE OIL CLEAR FACIAL FOAM
Benefit: Deep pore cleansing facial foam which can remove the dirt and toxin caused by air pollution. Get anti-oiliness skin.
Size: 50g (3,600 kyats), 100g (5,800 kyats)
4) NIVEA MEN DEEP ANTI-BLACKHEAD SCRUB
Benefit: Anti-blackhead scrub which contains powerful charcoal formula with cellulose beads. It can remove dead cells and remove blackheads.
Size: 75ml (7,000 kyats)
5) NIVEA MEN DEEP MOISTURIZING FLUID
Benefit: Anti-oil gets moisturizer which controls oil production and prevents blackheads on the face. No sticky residue.
Size: 50ml (11,000 kyats)
6) NIVEA MEN DEEP PORE CLEANSING MASK
Benefit: Formulated with black carbon & clay, it removes all dirt and excess oil and makes smooth in only 1 minute. Suitable for oily to very oily skin
Size: 75ml (7,500 kyats)
For more information, please visit the official Facebook page of NIVEA MEN (Myanmar) at https://www.facebook.com/NIVEAMENMyanmar/
NIVEA MEN မှ NIVEA MEN DEEP ပစ္စည်းသစ်များကို ရန်ကုန်တွင်မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂)ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် – NIVEA MEN မှ အမျိုးသားများအတွက် အထူးထုတ်လုပ် ထားသော NIVEA MEN DEEP ပစ္စည်းသစ်များကို ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာပလာဇာတွင် ယနေ့ ညနေပိုင်းက မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ယင်းပစ္စည်းသစ်များသည် သုံးစွဲသူအား မည့်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေး သည်။
“NIVEA MEN DEEP ပစ္စည်းတွေကို ၂၀၁၈ခုနှစ်က စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ် တာကာလအတွင်း ချိုုင်းကြားအသားအရေနဲ့ မျက်နှာအသားအရေ ပစ္စည်းတွေဟာ ရောင်းအား အရောင်းဆုံး နံပါတ်(၁) အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် NIVEA MEN DEEP ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို မီဒီယာတွေ၊ ပစ္စည်းသုံးစွဲသူတွေနဲ့အတူ ဒီနေ့ဆင်နွှဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု NIVEA မှ Marketing Manager ဖြစ်သူ Nikki Seelen က ပြောသည်။
NIVEA MEN DEEP ဆိုတာဘာလဲ။
NIVEA MEN DEEP သည် ချိုုင်းကြားအသားအရေနဲ့ မျက်နှာအသားအရေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ပြီးပြည့်စုံသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ယင်းပစ္စည်းသစ်များကို အစွမ်းထက်မီးသွေးဖြင့်ဖော်စပ်ထားသောကြောင့် ချွေးနံ့ဆိုးများကို (၄၈)နာရီကြာ ကာကွယ်ပေးကာ မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုုပ်ပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်စေသည်။
သုံးဆစွမ်းအားပြင်း မီးသွေးကာကွယ်မှု၊ လန်းဆန်းသောရနံ့များ
NIVEA MEN DEEP သည် စွမ်းအားပြင်း မီးသွေးဖော်မြူလာကြောင့် ချိုင်းကြားအသား အရေအနက်ရှိုင်းဆုံးအထိ ဘက်တီးရီးယားနှင့် ချွေးနံ့ဆိုးများကို (၃)ဆ တိုက်ထုတ်ပေးသည်။
ကြာရှည်ခံ လန်းဆန်းစေသောရနံ့သုံးမျိုးကြောင့် တစ်နေ့တာလုံးသန့်ရှင်းလန်းဆန်း စေသောခံစားမှုနှင့်အတူ (၄၈)နာရီကြာ ကာကွယ်မှုပေးသည်။
Roll On: ၂၅ မီလီလီတာ (၂,၃၅၀ ကျပ်) ၊ ၅၀ မီလီလီတာ (၄,၂၀၀ ကျပ်)
Spray: ၁၅၀ မီလီလီတာ (၆,၂၀၀ ကျပ်)
၎င်းတွင်အမျိုးအစား(၄)မျိုးရှိပြီး အဆီပြန်သောအသားအရေများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁ – Facial Foam
အဆင့် ၂ – Scrub
အဆင့် ၃ – Facial Moisturizer
အဆီပြန်သောအသားအရေမှ အလွန်အမင်း အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်
အဆင့် ၂ – 1-minute mask
အသားအရေးအတွင်းပိုင်းရှိ အဆီနှင့်အညစ်အကြေးများကို နက်ရှိုင်းစွာသန့်စင်ပေးသည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သော အသားအရေအတွင်းပိုင်းရှိ အညစ်အကြေးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးကာ အသားအရေကိုကြည်လင်စေသည်။
၅၀ ဂရမ် (၃,၆၀၀ ကျပ်)
၁၀၀ ဂရမ် (၅,၈၀၀ ကျပ်)
အဆီပြန်ပြီး ဆားဝက်ခြံရှိသော အသားအရေအတွက်
အစွမ်းထက်မီးသွေးနှင့် ဆဲလ်လူးလို့စ် စေ့များက ဆားဝက်ခြံများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးကာ ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
၇၅ မီလီလီတာ (၇,၀၀၀ ကျပ်)
အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ဆားဝက်ခြံများထပ်ပြီးဖြစ်မလာအောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
ဂျယ်လ်ဖြစ်သောကြောင့် စေးကပ်မှုမရှိပဲ အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်ပေးသည်။
၅၀ မီလီလီတာ (၁၁,၀၀၀ ကျပ်)
အစွမ်းထက်မီးသွေးက အသားအရေအတွင်းပိုင်းရှိ အဆီများကို ၁မိနစ်အတွင်း စုပ်ယူပြီး တွင်းထွက်ရွှံ့စေးပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကိုဖြည့်တင်းပြီး နူးညံ့ချောမွတ်စေသည်။
အဆီပြန်သော အသားအရေနှင့် အလွန်တရာ အဆီပြန်သော အသားအရေအတွက် သင့်တော်သည်။
၇၅ မီလီလီတာ (၇,၅၀၀ ကျပ်)
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို NIVEA MEN (Myanmar) ၏ Facebook စာမျက်နှာဖြစ်သော http://www.facebook.com/NIVEAMENMyanmar/ တွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သည်။
LycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMenMyanmarMyanmar PR AgencyNiveaNivea MenNivea Men DeepPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangon
Previous Previous post: Ovaltine Myanmar successfully organized its “Warm Family Bonding” Thadingyut Campaign with grandeur
Next Next post: Suzuki Showcases Latest Vehicles & Technologies Under The Theme of ‘Pleasure of Driving’ at Yangon International Motor Show 2020